Kanjani masinyane ukuthengisa imoto, abahlukaniswe engozini yemoto
Empilweni yakho uze ngosuku oluna imvula, ngeenhliziyo akho ayahlaba engozini yemoto futhi ukulungisa yabo akunakwenzeka ngenxa semali umonakalo. Isinqumo kuyinto ocacile abasebenzi uphethiloli hhayi kuncike isikhalazo, endaweni sephulwe imoto kuya yokulahla. Nokho, lesi simo bangazuza, ngisho namuhla ishaye imoto ayikwazi lilungisiwe, ungakwazi ukuthengisa, ukuze athole i-wakhe isizumbulu semali.
manje sale ophuthumayo imoto ngemva kwengozi isibe sibonga engokoqobo eziningi izinkampani ukulungele ukuthenga imishini eposini-ingozi eyalandela ukudayiswa ngoba izingxenye. Kulokhu, imishini wokuhlengwa ngempela kwenziwa ngokushesha, ezimweni eziningi, iklayenti uthola imali ngehora ngemva kokwelashwa. Amankampani usebenza inthanethi, ngokwanele ukubeka ezintweni zabo kuyi-Internet e imininingwane yakho yokuxhumana kanye nolwazi mayelana imoto, ngezithombe Attached ngemuva kwengozi nowokuhawukelwa abanikazi imoto uzothintwa ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Kodwa kukhona omunye komkhawulo, iningi amafemu okwamanje nentshisekelo izimoto eziphukile hhayi emidala kuno-2000 ngonyaka imodeli, clunkers, ngisho akekho niphihlizwe kufanele abe nesithakazelo, njengoba izingxenye imishini enjalo ngeke funa. Kanjalo-ke, ngokubeka ulwazi mayelana umnikazi wakhe imoto engumuntu ngeke kusadingeka silinde isikhathi eside, lo mncintiswano kule makethe kuphezulu futhi umncintiswano ngayinye alamu inqwaba Scrap Metal sina. Njengomthetho, ikholi wezwa ingxenye yesine ihora, futhi izwi Suave kubika kwangaphambilini-ke inani elilinganisiwe imoto isisulu.
Kodwa-ke, ukuthi udayiswe ngokushesha of imoto ngemva kwengozi ngaphandle luhlolo yayo kwangaphambilini akunakwenzeka. Ngenxa yalesi sizathu, inkampani kuyodingeka ukuhlangana uchwepheshe, okuyinto ezimweni eziningi uya endaweni lapho ngathola indawo yakhe yokuphumula zokugcina kanye ngokomoya futhi esisuka, futhi manje umshini buthule, okuyinto umsindo motor awusophinde ulizwe. Ochwepheshe kulo mkhakha ukuhlola ngokuningiliziwe isimo imoto, ukuhlola iphesenti umonakalo atshele yangempela emakethe value inqwaba yinqwaba eziphuthumayo Scrap Metal, okuyinto yaphenduka imoto yakho.
Uma intengo esilungele zombili, kuba okuthuthukile iklayenti Akudingi umzamo, inkampani ozoyenza ukususwa imoto kusukela akhawunti amaphoyisa omgwaqo kanye evacuates imoto khulula endaweni yalokho kulahla. Umnikazi zangaphambili ngeke bathole inhlawulo, usebenzisa okuyinto ungakwazi ukuthenga imoto entsha. Namuhla kuwukuphela scheme ngempumelelo eRussia elikuvumela ukuba ngokushesha balahle imoto eziphukile kule ngozi.
Emazweni European, leli qhinga eliye lenza laba ngokoqobo kwansuku zonke, kodwa ezweni lethu akuwona wonke esetshenziswa yile nhlangano. Naphezu kwakho konke lokhu-ke Kuyaphawuleka ukuthi lezi zinkampani zisebenza ngokuphelele ezingeni European, lokubonakala ijubane kanye ukulinganisa langempela. Ngenxa yalokho, bonke abantu uthola lokho afuna, imali kwamakhasimende kanye umthengi eziningi izesekeli, ngalo uzokwazi ukuba lithengise ngokunenzuzo.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi imininingwane imoto eziphukile izinga ngezinye izikhathi ungcono izinto kuthengiswa emakethe othengwe kusukela kwemboni, lokhu zichazwe iqiniso lokuthi izingxenye imoto umhlangano kwenziwa embonini efanayo nezingxenye kotoyre Bathengisa at iimfesi kwesinye.
Indlela yokusebenzisa i-hydrometer ukukala kwabantu electrolyte
Ithebhulethi Ngempumelelo ukukhulisa elithwala umoya-mpilo
Kuyini cross-imvumelwano? Cross, umusi, imvumelwano okuvalelwe
Kungani ingane umchamo onombala